İZBAN9တစ်နှစ်ရဲ့ဥရောပခရီးသည်ယာဉ်ပြည်သူ့အင်အား Up ကို '- rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirİZBAN9တစ်နှစ်ရဲ့ဥရောပခရီးသည်ယာဉ်ပြည်သူ့အင်အား Up ကို ''
30 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
ခရီးသည်တင်ဆောင်ဥရောပလူဦးရေရဲ့နီးပါးİZBAN, လှည်းစဉ် Izmir သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အဓိကကျောရိုးအဖြစ်9နှစ်အဆက်မပြတ်ရှည်လျားသောလိုင်းများနှင့်ဘူတာများနှင့်အတူခရီးသည်အရေအတွက်ကိုတိုးချဲ့တီထွင်ခဲ့သည်။
ဆင်ခြေဖုံးစနစ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ၏အကြီးဆုံးမြို့İZBAN,9များအတွက်လေဆိပ်နှင့်ဆက်စပ်။ အသက်အရွယ်ဆင်နွှဲဖို့ဂုဏ်ယူသည်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာမသာကျန်ရစ် "စာနာထောက်ထားရေး" နှင့်သြဂုတ်လ 30 2010 အပေါ်İZBANစီမံကိန်းကိုတင်ဆောင်လာသောပထမဦးဆုံးခရီးသည်အဖြစ် "Synergy"9နှစ်, ဥရောပရဲ့အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာရထားလမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစျဦး၏အနေအထားမှထ။ 24 နှင့်İZBANလမ်းနှင့်အတူ 31 ဘူတာရုံလှည်း, အဆက်မပြတ်ကြီးထွားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးကားများနှင့်ခရီးသည်ရှည်လျားလိုင်းများနှင့်အတူဘူတာ၏နံပါတ်ပွားခြင်းဖြင့်ကြီးထွားနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
နေ့စဉ်လေယာဉ်ခရီးစဉ် 219 275 Wagon
လှည်းပါဝင်ပါသည်ကြောင်း 24 8 Bundeli ဝန်ဆောင်မှုကြောင်းကာလအတွင်းလုပ်အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထဲကတစ်ခု Izmir ရဲ့သမိုင်းဝင်ရထားလမ်းစနစ် 2014 နှစ်İZBANမှစတင်ခဲ့ပြီးပင်လယ်ကွေ့လင်းပိုင်ဝန်ဆောင်မှုသတ်မှတ်ခေါ်သွားတယ်။ ထို့ကြောင့်စဉ်နေ့စဉ်ပျံသန်းမှုများ၏အရေအတွက်ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေဖို့, လှည်း 219 İZBAN၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးအမြန် 275 သည်။ İZBAN, ခရီးသည်များ၏ကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ရန်ဧရာစင်းကိုကြွလာကာလအတွင်းထပ်မံကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
STATION ကိုထံမှ STATION ကိုမှ 31 41
အဆိုပါİZBANနှင့်အတူလမ်းမပေါ်တွင် Aliaga 80 31 ဘူတာမှ Cumaovasi ကီလိုမီတာလိုင်းမှတက်ပါကချက်ချင်းလခြမ်း၏အဖွင့်ပြီးနောက်တောင်ပိုင်းဝင်ရိုးထဲမှာကြီးထွားဖို့ဆက်လက်သိရသည်။ လိုင်းအရှည်6ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိခဲ့သည်စဉ်ဘူတာ၏ 38 110 အရေအတွက်ကို၏ညှနျကွားအတွက်ဘူတာရုံ၏ကော်မရှင်အိတ်စွပ်။ ကနျြးမာရေး Selcuk မီနှင့်အပြီးTorbalı'ya, Belevi နောက်ဆုံးတော့ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။ ထို့ကြောင့်လိုင်းအရှည် izban ဘူတာရုံလည်း 41 136 ကီလိုမီတာအထိမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
İZBANပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကာလ9650 သန်းခရီးသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဥရောပတိုက်ကြီး 750 လူဦးရေသန်းİZBANနထေိုငျတိုငျအောငျလုနီးပါးခရီးသည်တင်ဆောင်မြောက်ဘက်-တောင်ဘက်ဝင်ရိုး izmir'inxnumx ပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာ၏ကျောရိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ 8 24 2017 အတွက်အောက်တိုဘာလအတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်တထောင်သမိုင်း၌ပို့ဆောင်ခရီးသည်နှင့်လစဉ် 347 2017 သန်းခရီးသည်ခရီးသည်တဲ့အခါမှာအများဆုံးကာလအဖြစ်မှတ်တမ်းများနေရာယူခဲ့ပါတယ်။
ခရီးသည်အရေအတွက်သယ်ဆောင်: 650 သန်း
စုစုပေါင်းဖန်ဆင်းအချိန်: 760 တထောင်
စုစုပေါင်းဖန်ဆင်းမိုင်အကွာအဝေး: 46 သန်း
နေ့စဉ်အများဆုံးခရီးသည်: 347 တထောင် - အောက်တိုဘာလ 24 2017
လစဉ်အများဆုံးခရီးသည်: 9,4 သန်း - အောက်တိုဘာလ 2017
နှစ်စဉ်အများဆုံးခရီးသည်: 97,4 သန်း - 2017
တရုတ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလူဦးရေအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေဖြင့်ခရီးသည်တက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် 25 / 06 / 2014 တရုတ်နှင့်အမေရိကန်လူဦးရေအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ခရီးသည်တက်ပြောင်းရွှေ့: မနှစ်ကမြို့ဘတ်စ်ကား, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြင့် Metrobus, ကူးတို့နှင့်ရထားလမ်းသန်း 1 တထောင်ဘီလီယံခန့် 602 262 915 လူတွေကိုခရီးစဉ်ကိုဖန်ဆင်းပါဝင်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအစ္စတန်ဘူလ်ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူမြို့ပြလူဦးရေရဲ့ဘတ်စ်ကား, Metrobus, ကူးတို့နှင့်ရထားလမ်းသန်း 115 ဘီလီယံကိုအစိုင်အခဲ 1, ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံးတိုင်းပြည်, အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏စုစုပေါင်းလူဦးရေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ 602 အကြောင်းကို 262 ရန်စနစ်၏ပါဝင်ပါသည်တထောင် 915 လူများခရီးစဉ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါ AA ကိုသတင်းထောက်တို့ကပြုစုသတင်းအချက်အလက်များအရ, နိုင်ငံသားများအများဆုံး IETT ်ထမ်းဆောင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ...
တက်ပြောင်းရွေ့နေတဲ့ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားulaşımparkလ Kocaeli ပြည်သူ့အင်အား 17 / 07 / 2019 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်က၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများulaşımparkကြောင့် Kocaelili နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုသေချာစေရန်ထိုဒေသတွင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးတိုးမြှင့်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ နေ့စဉ် Kocaeli ulaşımparkနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်တစ်လျှောက်လုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲ့ဘတ်စ်ကား 336 မှပံ့ပိုးမှုများ၏ကျယ်ပြန့်အများစုယူဆ။ ဤရွေ့ကားဘတ်စ်ကားခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများပေးနေဖြင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှမရှိမဖြစ်ဖြစ်လာကြပါပြီတထောင် 2019 10, 509 သန်းယခုနှစ် 761 ၏ပထမခြောက်လဖြစ်ကြသည်။ အရည်အသွေး, တစ်ဦးအဆင်ပြေများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံခရီးulaşımparkရာပူဇော်သက္ကာကို, 1 လအတွင်း Kocaeli ၏လူဦးရေသည်အထိခရီးသည်တင်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။612 လလမ်းမိုင်အကွာအဝေးသူတို့ဘတ်စ်ကားulaşımparkပါဘူး, ခရီးသည်များထက်ပိုနေတဲ့တထောင် 65 500 ၏နေ့စဉ်ပျမ်းမျှလွန်းသည်။ ...
ယာဉ်ပိုလန်၏လူဦးရေရှိပြီးသည်အထိပြည်သူ့တစ်နှစ် Estram 27 / 02 / 2015 အကြှနျုပျ၏ Estrada တစ်ခုမှာတစ်နှစ်တာ Up ကိုတွေ့ဆုံသည့်ယာဉ်ပြည်သူ့အင်အားပိုလန်: Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် 11 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်များနှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစံချိန်တင်အပြေး, မြို့အတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်။ 2014 37 သန်းနိုင်ငံသားများဧည့်သည်များရှိခဲ့ပါတယ်တက်ရွေ့လျားနေဖြင့် 294 241 တထောင်ခရီးသည်ခုနှစ်တွင်မြို့လယ်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပေါ်လာတာဟာအရင်၏ပိုလန်လူဦးရေ။ အဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သတင်းထောက်Eskişehirအလင်းရထားစနစ်အုပ်ချုပ်ရေး (ESTRADA) မှ General Manager Hakan Murat, နှစ်တွင် 2014 အသစ်လိုင်းများကော်မရှင်ကဝင်ရောက်အတူပေါ်လာတာဟာအရင်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ထုတ်ပြန်ချက်များထဲမှာ, အဲဒီတစ်နှစ်စုစုပေါင်း 37 သန်း 294 တထောင် 241 လူတစ်ဦးခရီးသည်အသားကဆိုသည်။ စုစုပေါင်းတစ်နှစ် 2014 ...
အတ္တတူရကီပြည်သူ့အင်အား Up ကိုပြည်သူ့ Times သတင်းစာ 4.5 ယာဉ်၏နောက်ဆုံးတစ်နှစ်တာ 09 / 02 / 2016 တူရကီအတွက်ခရီးသည်သန်းတထောင်အတ္တ၏တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမနှစ်က 4.5 331: နောက်ဆုံးတစ်နှစ်တာအတ္တတူရကီပြည်သူ့အင်အား Up ကိုပြည်သူ့ Times သတင်းစာ 852 ယာဉ်၏။ 78 ကြိမ်တူရကီ၏လူဦးရေ, သူတို့ရဲ့ခရီး၏အတ္တဘတ်စ်ကားအကြောင်းကိုဤလူနဲ့ကိုက်ညီသည့် 742 4,5 တထောင်သန်း, Ankaray, ထိုကဲ့သို့သောမက်ထရိုနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားအဖြစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူကမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်မည်သည့်ပြဿနာမျှစီမံကိန်းများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုချပြီးအဆိုပါအသက်အားဖြင့်လိုအပ်သောနည်းပညာအဆောက်အဦ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုသင်တန်းနည်းပြလက်တွေ့ကျကျ applications များ, အသုံးပြု. တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ကမ္ဘာ့မြို့တော်များမစ်ရှင်နှင့်ရူပါရုံကိုသာဓကနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီအ ...
သူသည်နယ်သာလန်ထံမှလက်ခံရရှိသန်းဒေါ်လာအမှိုက်ပုံးစိတ်ထဲ IBB '' Metrobus ခရီးသည်သည်အထိအမ်စတာဒမ်၏လူဦးရေမှာ '' Metrobus လာ. , 16 / 03 / 2017 အမ်စတာဒမ်လူဦးရေအထိ IBB '' Metrobus ခရီးသည် "ဟုသူကစိတျကူးအမှိုက်ပုံးနယ်သာလန်သန်း Metrobus ထံမှယူဆိုပါတယ်ရောက် လာ. , Twitter ကို" အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးသင်သိတာလားကျွန်တော်အမ်စတာဒမ်လူဦးရေကနေပိုပြီးခရီးသည်သယ်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Metrobus လိုင်းနှင့်အတူနေ့စဉ်နေ့တိုင်း "ဟုအဆိုပါအကောင့်မေးလျှင်" "? မေးခွန်းများကိုနယ်သာလန်ထံမှလက်ခံရရှိပြီးတော့သူကအစ္စတန်ဘူလ်မှသင့်လျော်သောဘတ်စ်ကားမဟုတ်ပါဘူးကြောင့်အမှိုက်ထဲမှာပစ်ချ 200 သန်းဒေါ်လာသတိရဆောင်ခဲ့လေ၏။ "အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး" "သငျသညျအကြှနျုပျတို့အမ်စတာဒမ် Metrobus ခရီးသည်တင်လိုင်း၏လူဦးရေထက်ပိုမိုနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသယ်ဆောင်သည်ကိုသင်တို့သိသလား" twitter account ကိုမေးမွနျးနှင့်နယ်သာလန်နှင့်အတူတင်းမာမှုများကိုရည်ညွှန်းပြီး အဆိုပါ Metrobus line ကနေယူမေးခွန်းများကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်နှင့်ပြင်းထန်မှုအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်တွေ့ဆုံရန် ...
သူသည်နယ်သာလန်ထံမှလက်ခံရရှိသန်းဒေါ်လာအမှိုက်ပုံးစိတ်ထဲ IBB '' Metrobus ခရီးသည်သည်အထိအမ်စတာဒမ်၏လူဦးရေမှာ '' Metrobus လာ. ,
အဆိုပါ 419 taşınacakhattခုနှစ်တွင်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လိုင်းအတွက်တစ်ကြိမ်မှာခရီးသည်တဦးတည်းအချိန် 419 ခရီးသည်မှာပြောင်းရွေ့ပါလိမ့်မည်
ခရီးသည်တင်ဆောင် izban ဘတ်စ်ကား, izban'l compatible're အလုပ်လုပ်
ဥရောပဘောလုံးချန်ပီယံရှစ်မှာခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးများအတွက် 2012 ပိုလနျယူကရိနျးရုရှားသဘောတူညီချက်ရှိခဲ့သည်